Raspberry Pi 4 ine kukundikana mune yayo USB-C | Kubva kuLinux
Raspberry Pi 4 ine mhosva mune yayo USB-C
Isaac | | Chigadzirwa
Raspberry Pi Foundation yakatsigira iyo Iyo ine kukanganisa mune USB-C dhizaini yayo nyowani Raspberry Pi 4 mabhodhi. Vanotarisira kuzvigadzirisa mune ramangwana, asi parizvino, avo vanotenga Raspberry Pi 4 havazogadzirise uye vachatofanira kusangana nekutadza uku pasina imwe nzira. Zvinotaridza kuti iyi hombe kuvandudza kuPi bhodhi yakafukidzwa zvishoma nedambudziko iri, asi iwe unofanirwa kuvimba navo uye kumirira kuti uone mhinduro yavanokupa, pasina kupinda mukushushikana.
Iwe unotoziva kuti chimwe chezvinhu zvakasarudzika zveiyo Raspberry Pi 4 SBC bhodhi ine CPU ine simba, inosvika ku4GB ye RAM, yazvino USB-C yesimba, nezvimwe. Zvakanaka, zviri chaizvo izvo zvazvino USB-C ndiko kunokonzera matambudziko. Yekutanga hwaro hweta ine iyi mhando yekubatanidza uye ivo vane zvakashata mukugadzirwa sezvakatsanangurwa naTyler Ward. Uye ndizvozvo kurodha chiteshi haina kutsigira USB-C sezvazvinofanira kuita.
Matareja mazhinji haashande bhodhi iri, uye iro idambudziko. Tyler Ward akakwanisa kuzviona nekuda kweyakavhurika bhodhi reSBC, sezvo schematics dziri pa internet. Ward aigona kuona kubva kwavari kuti ivo vanogadzira havana kungogadzira doko ravo nemazvo. Unofanirwa kudaro mapini maviri eDC ane yavo 5.1K ohm resistor, asi ivo vakagadzira dhizaini umo ivo vanogovana kumwe kushora.
Iyo dhizaini haifambidzane neyazvino ine simba USB-C majaja. Zvese ndiro dzakanyorwa E, ayo ari echizvino uno ane machipisi emukati ekugadzirisa magetsi, ndiwo anounza matambudziko. Saka nzvenga iwo majaja. Nevamwe hapana kana dambudziko, asi avo kana vachibatanidza iyo Pi vanoiona sekunge yaive odhiraivhi adapta uye saka havape simba. Saka ... iwe unofanirwa kutarisira kuti pamwe nekudzokorodzwa kutsva kwebhodhi kuchazogadziriswa, asi ikozvino ndiyo nguva yekubatirira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chigadzirwa » Raspberry Pi 4 ine mhosva mune yayo USB-C
Iyo Genode chirongwa chakaburitsa iyo nyowani vhezheni yayo OS Sculpt 19.07
Iyo nyowani vhezheni 5.2 yeLinux Kernel yakatove yaziviswa